Isibambiso esiphezulu se-Offshore Trust ye-Asset Protection kusuka ku-Lawsuits
I-Best Offshore Trust Yomthetho Wokuvikelwa Kwezimpahla
Ukuvikelwa kwempahla kuyinxenye ebalulekile yomthwalo wemali. Isibopho ngumkhiqizo wokwenza ibhizinisi. Cishe bonke abantu bamabhizinisi babhekene nezinsolo zokuthi kungenzeka ukuthi ziphikisana namacala. Abasebenza ezindaweni eziphakeme kakhulu ezifana nokunakekelwa kwezempilo kanye nokwakhiwa kuyingozi enkulu nakakhulu. Amathenda okuvikela impahla bathole idumela lokuba omunye wamathuluzi angokomthetho atholakalayo. Ngaphezu kwalokho, umthetho wecala ubonisa ngokuphindaphindiwe ukuthi amathenda ase-offshore aphumelela kakhulu kunabalingani bawo basekhaya. Sixoxisana nomsebenzi wezinkolelo zokuvikela impahla, izizathu zokuhamba olwandle, kanye negunya eliphakeme kunazo zonke emhlabeni jikelele.
UkuThembeka Kwempahla Kusebenza Kanjani?
Uhlobo lwezinkokhelo zokuvikela izimpahla esizixoxayo lapha yizinkolelo zokuchitha imali ezithintekayo ezingaguquki. Ukuthembela okungenakuguqulwa kuyithemba elingahle likwazi ukuguqula noma lokuqeda ngaphandle kokubambisana phakathi kwabasebenzi kanye / noma abazuzi kanye nomphathiswa. Ngokukhuluma ngokuqondile, ukuhlelwa kwe-trust kudlulisa ilungelo labo elingokomthetho lobunikazi bezimpahla ezibekwe ku-trust. Ukuthembela okuzinzile kuyisethembiso lapho uhlala khona njengomzuzi othembekile. Ukuhlelwa kokulawulwa kwezindawo zokuthembela kwamagugu e-trust ezandleni zomphathiswa. Kwezinye iziphathimandla, ukulungiswa kungase kube njengomphathi-co-co. Ngenxa yalokho, kuye ngokuthi yikuphi amandla, ukulungiswa kwemali kunethonya elikhulu phezu kokunikezwa kwempahla eyenziwe kwabazuzi.
Kuyadingeka ukuthi umphathiswa alawula ukusabalalisa okwenzelwe ukulungiswa. Lokhu kungenxa yokuthi uma umzuzi angakwazi ukusabalalisa impahla ngokuzimela izinkantolo zingase ziphoqe isandla sakhe ukuba sibasakaze kubakweleta. Ngakho-ke, i-trust ithola izimpahla ezigcinwe ku-trust kusuka kwababolekisi ngenxa yalomkhawulo wamandla. Njengoba ukuhlala nabazuzi bengakwazi ukulawula ukwabiwa kwabo, izinkantolo ngeke zibaphoqele kalula ukuba zenze ukwabiwa kwabanye.
Kunezinombolo zeziphathimandla ezihlinzeka ngemali yokuvikela impahla. Sithi lezi zithemba zihlelwe ezinkampanini zokuvikela izimpahla zasekhaya zase-United States. Ama-trusts okuvikela impahla asekhaya asevunyelwe okwamanje kuma-17 ase-United States.
Ama-trusts e-offshore yokuvikela impahla, afana nalawo ase-Cook Islands naseNevvis, ahlinzeka ngezinzuzo eziningana ezenza zikhethelwe ezinkampanini zokuvikela impahla. Sixoxa ngezizathu ezenzansi ngezansi.
Kungani Kumisa Ithemba Lase-Offshore?
Eziningi zezindawo eziphezulu ezisemaphandleni zinemithetho ekhonza ukusekela ukuvikelwa okutholakala ngamathenda okuvikela impahla. Izinzuzo ezilandelayo zenza i-offshore ithemba elinye lamathuluzi angokomthetho aphezulu okutholakala ukuvikelwa kwempahla:
Ezindaweni eziningi ezihle ezise-offshore, ukulungiswa kwezinto zokuvikela impahla kuyindaba yangasese. Kulezi ziphathimandla, i-trust, ngokwayo, namagama abazuzi kanye nabahlali ababhalwa obala. Igama le-trust, amagama ka-trustees, nosuku lomsebenzi wokwethenjwa ubhalisiwe. Amarekhodi kulezi ziphathimandla azivulelekile emphakathini. Omunye kufanele athole umyalelo wenkantolo wendawo ukuze uthole isicelo esifanele, njengokudluliswa kokukhwabanisa, ngaphambi kokubuka amarekhodi. Ubumfihlo bezezimali kuyisinyathelo esibalulekile sokuqala sokuvikela impahla. Ukugwema ukuboniswa komcebo okwehlisa umzimba kunciphisa ababolekisi bezingozi noma abaphikisana nemali abakubona njengamaxhoba alula. Ekugcineni, noma kunjalo, ubumfihlo kuphela abuyena. Uma ishidi liphakanyisiwe, amakhomishana angcono kakhulu asezindaweni zasemaphandleni ahlinzeka ngemithetho eqinile yokuvikela.
Ukuvikelwa Kwezigwebo Zangaphandle
Amandla afanelekayo ase-offshore awaqapheli izahlulelo zezinkantolo zangaphandle. Labo abafisa ukwenza izimangalo ngokumelene nempahla egcinwe esithembeni se-offshore kumele benze kanjalo ngokusebenzisa uhlelo lwenkantolo yendawo. Lokhu kuvame ukubandakanya ukuhamba ngokomzimba ukuya enkantolo ukuvela enkantolo. Ukwengeza, enye yezimangalo ezimbalwa ezingakwazi ukuvimbela ukuvikelwa kwe-asethire yokuvikela impahla ye-offshore isinqumo sokudlulisa inkohliso. Ukudluliswa ngokweqile, ngendlela, kuyindaba yomphakathi, hhayi yecala.
Ukudluliswa kwezimpahla ezikhohlisayo kwenzeka lapho ukuguqulwa kwe-trust kudlulisela amafa ngenhloso yokwehlisa noma ukuphinga umbolekisi. Izindleko kanye nesikhathi esihlotshaniswa nokwenza isimangalo esinjalo emagunyeni ase-offshore ngokuvamile kuvame ukuvimbela abakhokhisi. Ngaphezu kwalokhu, umkweletu othola isinqumo sokudluliswa kwamacala okukhwabanisa emandleni afana ne-Cook Islands, Nevis noma eBelize kulula ukushiwo kunokwenziwa; kulula kakhulu. Eqinisweni, singabantu inhlangano enkulu kunazo zonke emhlabeni esungula amathenda ase-offshore. Asikaze sibone umkweletu ukuthi athole isinqumo esibhekene naso kwamanye amazwe ngaphesheya kwanoma yikuphi ukwethenjwa kwe-offshore esiyifumene.
Isitatimende esifushane sokulinganiselwa
Ama-offshore e-Offshore ukuvikela izimpahla ze-trust eziphathekayo ngokuvamile zihlinzeka ngemithetho emifushane yokulinganiselwa kunamakhomishini amaningi okuvikelwa kwempahla yasekhaya. Ukwengeza, umthwalo wobufakazi bokufaka izicelo zokukhwabanisa ukukhwabanisa ukhulu kakhulu emazweni angaphandle. Umthwalo wokufaka ubufakazi ufakwe kumklomelo. Ezindaweni eziningi ezifuywayo zasekhaya, umthwalo wobufakazi bokudluliswa kobuqili ubufakazi obucacile nobucacile. Emagunyeni asemaphandleni asezingeni elihle, umthwalo wobufakazi awukho ngaphezu kokungabaza okunengqondo. Umbolekisi kumele anikeze ubufakazi obunjalo bokugweba umuntu ngokudluliselwa kobuqili njengoba kuzodingeka ukuze ajezise umuntu ngokubulala.
Isibonelo emaqhingini e-Cook kufanele kube nomunye umuntu okufanele alethe isimangalo sokudlulisa inkohlakalo esikhathini esingangonyaka owodwa we-trust esungulwe futhi exhaswe ngemali. Ukwengeza, kumele bawulethe kungakapheli iminyaka emibili imbangela yesenzo. Yilokho, isizathu sokuthi kungani othile efaka icala. Uma umuntu efaka icala lokuthutha ukukhwabanisa e-Cook Islands emva kwalesi sikhathi, izinkantolo ziyonqaba ukuzwa icala. Ake sicacise lapha. Ngisho noma othile eshaya iwashi futhi efakwe amafayela ngesikhathi esifanayo, izithiyo ziphakeme kakhulu kangangokuthi asikaze sibone iklayenti lethu lilahlekelwa yimpahla yokuthembela kumthengi.
Okuzuzisa Ukuhlelwa Kwezimali
Amandla amaningi ahloniphekile anikezela ukukhokhiswa intela kwezikholo zamazwe ngamazwe. Lokhu kungenza amathenda ase-offshore ithuluzi elikhangayo lokuhlela intela. Lokhu kuhluka ngombuso wabasebenzi nabahlomulayo. Abantu base-US bakhokhiswa intela emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, kumuntu wase-US ukuthembana okungekho emthethweni. Akukho ukwanda noma ukwehla intela. Ngakho-ke, isakhamuzi sase-US, i-trust ithatha ingilazi ye-bulletproof. Izinhlamvu zamacala azingena ngaphakathi. Nokho, izintela zikhanyisa njengoba zikhanya ngilazi.
Ukugcinwa Kokulawulwa Ngama-Settlors
Amathenda ase-Offshore ezikhundleni ezinhle kakhulu anika abaxazululi amandla okugcina izinga eliphakeme lokulawula phezu kwempahla ye-trust. Enye indlela yokwenza lokhu ngokusungula inkampani yesikweletu esiphezulu se-offshore ngokubambisana ne-offshore trust. I-offshore trust inomnikazi we-LLC. Omunye udlulisela izimpahla kwi-akhawunti eyodwa noma ngaphezulu noma ebhange lokutshala izimali i-LLC. I-settlor yabizwa ngokuthi yi-manager wokuqala we-LLC. Ngenxa yalokho, bayakwazi ukulawula imisebenzi yansuku zonke yenkampani i-trust. Lokhu kuhlanganisa ikhono lokulawula izimpahla ezigcinwe yinkampani.
Uma ukuphikisa kusongela izimpahla, akudingeki ukuba ufihle impahla. Kukhona nje ushintsho lokuphathwa kwe-LLC. Umphathiswa uthatha indima eyengeziwe njengomphathi we-LLC. Ngakho-ke, lapho izinkantolo zendawo zidinga ukubuyiselwa kwemali yokwethenjwa, abanalo igunya phezu kwe-trustee yangaphandle. Esimweni sethu, umthetho wethu uqine ama-Cook Islands noma i-Nevis ukuze kuvikelwe impahla ye-trust. Amafa ahlala ku-LLC ukuthi i-trust ithemba. Ngakho-ke, akukho ukuthutha kwezimpahla ezikhohlisayo, kuphela ukuguqulwa kokuphathwa.
Isivikelo Ngesikhathi sokucindezelwa kwezomthetho
Ama-trusts ase-Offshore angaba amathuluzi asebenzayo okuvikela amafa ngenkathi engaphansi komthetho. Lokhu kungenxa yokuthi amathenda ase-offshore ahlukanisa isithakazelo esingokomthetho nesinzuzo samafa aphethwe ngaphakathi kwethenda. Njengoba ukususwa kwe-trust kungase kungabi ukulawula ukunikezwa kwempahla ngokwabo, kungavikela lawo mafa kusuka kubathengi. Ukwengeza, abaphathiswa bezinkokhelo zasolwandle abanqatshelwe ukusabalalisa izimpahla umthengi angabamba uma ukulungiswa kwetrust kungaphansi kokucindezeleka okungokomthetho. Nokho, umphathiswa angakwazi ukukhokha izikweletu egameni le-settler. Bangase bakwazi nokwenza ukwabiwa kwezimpahla kumngane othembekile noma isihlobo ngenxa yesimo sokulungisa.
Okuzuzisa Ukuhlelwa Kwempumelelo
Amandla amaningana afanelekayo ase-offshore awunalo umthetho olwa namathemba angapheli. Ngenxa yalokho, amathenda ase-offshore enza amathuluzi amakhulu okuhlelwa kwezindlu. Ngenxa yalokho, ikusasa le-trust linikeza ukusekelwa ezizukulwaneni eziningana. Ngaphezu kwalokho, iziphathimandla zasemaphandleni aziqapheli imithetho yangaphandle yefa.
Iziqhingi zase Cook: I-Best Offshore Trust Authority
Uma kuziwa ekuxazululeni ukwethenjwa kwe-offshore, igunya liyizinto zonke. Okokuqala futhi okubaluleke kakhulu, ukuthembela kuncike emithethweni yombuso lapho kusungulwe khona. Ngenxa yalokho, kubalulekile ukukhetha ubukhosi nemithetho evumelana nokuvikelwa kwempahla. Okwesibili, imithetho yombuso inamandla nje njengohulumeni obaqinisa. Ngenxa yalesi sizathu, umuntu kumele acabangele isimo sokuthuthukiswa, ukuzinza kukahulumeni, nokuqina komnotho wegunya. I-Cook Islands ihlanganisa imithetho ephakeme kunazo zonke yokuvikelwa kwempahla kanye nohulumeni ozinzile kanye nomnotho ozinzile. Ngenxa yalezi zizathu, i-Cook Islands zibhekwa kabanzi ngokuthi yiyona ndlela enhle kakhulu yokuvikela ukuphathwa kwempahla emhlabeni jikelele.
I-Islands Cook ingatholakala eNingizimu Pacific Ocean phakathi kweHawaii neNew Zealand. Babonwa nguKaputeni Cook ku-1770, yileyo ndlela abathola ngayo igama labo. I-Cook Islands yaba isivikelo seBrithani ku-1888. Ukulawulwa kokuphatha kweziqhingi kwadluliselwa eNew Zealand ku-1900. Iziqhingi zaseCheka zilokhu zizibusisa kusukela ku-1985. I-Cook Islands iyindawo ehambisanayo yeNew Zealand ngaphansi kokuhlangana kwamahhala.
Iziqhingi zase-Cook zineGDP ye-US $ 300 million. Mayelana ne-8% yale GDP itholakala ebhizinisini lamanye amazwe namathemba. Umkhakha omkhulu kunawo wonke e-Cook Islands yizokuvakasha. Lokhu kungumphumela wamabhishi amahle wezwe kanye nesiko elidumile. Isizwe esikhuluma isiNgisi sakhiwa iziqhingi ezihlukene ze-15. Bakha indawo engamakhilomitha ayisigidi angu-92.
I-Cook Islands Trust Izinzuzo
Enye yezinzuzo ezinkulu kunazo zonke iziqhingi zaseCheka eziphezu kwamanye amalungelo okuvikelwa kwempahla kuyisibonelo esingokomthetho. Imithetho yokuvikela impahla izosebenza kuphela ukuvikela izimpahla uma izinkantolo zendawo zibaxhasa. Ukucabangela nje ukuthi izinkantolo zizosekela imithetho yokuvikela izimpahla kuyisimo esiyingozi. Ezimweni eziningi zokuvikela izimpahla zezimali, ikakhulukazi iziphathimandla zasemakhaya kanye nemithetho esemthethweni yokuvikela impahla, akusikho isibonelo esilandelayo sokuvikelwa kwempahla.
Okubalulekile ngokomthetho kubaluleke kakhulu ukuze uqiniseke ukuthi izimpahla zizovikelwa uma kwenzeka ukucindezeleka ngokomthetho. I I-Cook Islands iyakuthemba unomlando womthetho wezomthetho wokuvikela umcebo womthetho kwanoma yikuphi ukulawula emhlabeni. Ngempela izinkulungwane zamacala mayelana nokuvikelwa kwempahla ziye zazama eNkantolo zaseCook Islands. Isikhathi nesikhathi, lezi zinkantolo ziye zalawula ukuvikela izimpahla egameni le-settlement. Ngenxa yalokho, abahlali beCoples Islands bayakuqinisekisa ukuthi izimpahla zabo zizovikelwa kwabakweleta.
Ukubaluleka nakho kubalulekile lapho ukhetha ukugunyazwa kokuvikela ukuphathwa kwempahla. Amanye amaphethelo asethempelini athembekile awela ngaphansi kokuphepha ukuze asetshenziswe izinkampani zomhlaba wonke ukugwema intela. Okubi nakakhulu, ezinye iziphathimandla ziye zaxhunyaniswa ukuba zisetshenziselwe ukuxhasa izimali zamaphekula noma ukukhishwa kwemali. I-Cook Islands ikwazile ukuphunyuka lokhu kuhlolisiswa. Iziqhingi zaseCheka zihlinzeka abaqashi bempahla yokuvikela bathembele ikhono lokuvikela ngokomthetho izimpahla zabo. Ibavumela ukuba benze kanjalo ngaphandle kokudala ukubukeka kokuthatha ingxenye kunoma yimiphi imisebenzi engavumelekile yezezimali.
Amathenda okuvikela impahla yinye yezindlela ezinhle zokuvikela izimpahla ezivela kubakweleti nezikweleti. Ngenxa yezizathu ezingenhla, isipiliyoni sethu sibonisa ukuthi ukukhokha kwe-asethire yokuvikela impahla ehlala emazweni aseCheka Cook inikeza ukuvikeleka kwefa elihle kakhulu emhlabeni jikelele.